FAQ – YgnHome.com
FAQ (မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ)
အမှတ် ၁၁၀ အခန်း ၁၇၊ ၃လွှာ၊ ပြည်လမ်းမ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာပါ
အင်္ဂါ မှ စနေ –> မနက် ၈ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၆ နာရီ
တနင်္ဂနွေ –> မနက် ၈ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၄ နာရီခွဲ
တနင်္လာ –> ပိတ်ပါသည်
အမြန်‌ဆုံးရောင်း/ငှားချင်ရင် ဖုန်း 01-667758 ကိုဆက်ပြီး YgnHome ကိုအိမ်အပ်လို့ရသလို
ဒါမှမဟုတ် အိမ်အပ်ရန် Link ကိုနှိပ်ပြီး အကောင့်အသစ်ဖွင့်၍လည်း ချက်ခြင်း Web Page ပေါ်တင်လို့ရပါတယ်
အိမ်ရောင်း / ငှားဖို့ အပ်ရင် ဘယ်လောက်ပေးဖို့ လိုပါသလဲ?
မိတ်ဆွေ ရဲ့အိမ်ခြံမြေအတွက် ငွေအပြီးမချေခင်အထိ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး အခမဲ့ပါ…
အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ (အမြန်ရောင်းထွက်ရန် အကြံပေးခြင်း၊ ဗွီဒီယို နှင့် ဓတ်ပုံရိုက်ကူး ပြီး Webpage ပေါ်တင်၍ကြော်ငြာခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားသောသူများအား လိုက်လံပြသခြင်း နှင့် စာချုပ်ချုပ်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်း) တို့ ဖြစ်ပါတယ်…
အရောင်း/ အငှားအတွက် ငွေချေပြီဆိုမှ…
အိမ်ပိုင်ရှင်ထံမှ ရောင်းရငွေ၏ ၂% သာ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အိမ်ငှားအတွက် တစ်နှစ်ချုပ်ရင် (တစ်လစာသာ) ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်…
အိမ်ဝယ်သူ နှင့် အိမ်ငှားသူ တို့အတွက်ကတော့ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်…(YgnHome.com ကအိမ်‌တွေ အရောင်း‌ရော အငှားပါအထူးမြန်နေတဲ့ လှို့ဝှက်ချက်ပါ)
ဓတ်ပုံ နှင့် ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးပေး √
မရောင်းရသေးခင်အထိ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု √
ကုန်ကျစရိတ် ၂%သာ တစ်လ ၂သောင်း ကျပ်
ကျွန်တော့်အိမ် ရောင်းချင်နေတာ ကြာပြီ... အမြန်ရောင်းချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အမြန်ရောင်းချင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေ များကို YgnHome ရဲ့ ဦးစားပေးစာရင်းသွင်းပြီး Promote လုပ်ရန် ရုံးခန်းကို လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်…ပိုင်ဆိုင်မှု မိတ္တူတစ်စောင်ဆွဲပြီး ယူလာပေးပါ…
YgnHome ရုံးခန်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ၈ မိုင်လမ်းဆုံ (ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင်) အရှေ့မှာပါ…
အင်္ဂါ မှ စနေ –> မနက် ၈ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၅ နာရီခွဲ
တနင်္ဂနွေ -> မနက် ၈ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၄ နာရီခွဲ
တိုက်ခန်း လူငှားမရတာ ကြာပြီ...မြန်မြန်လူငှားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အမြန်ငှားချင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေ များကို YgnHome ရဲ့ ဦးစားပေးစာရင်းသွင်းပြီး Promote လုပ်ရန် ရုံးခန်းကို လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်…
ကန်ထရိုက်တာ နှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက်
YgnHome ရုံးခန်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း ၈ မိုင်လမ်းဆုံ (ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင်) အရှေ့မှာပါ…
တိုက်ခန်းတွေ မြန်မြန်အရောင်းထွက်ချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဖုန်း 01-667758 ကိုဆက်ပြီးတိုက်အပ်လို့ရပါတယ် (ဆောက်လုပ်ရန် Design Approved ဖြစ်တာနဲ့ စအပ်လို့ရပါပြီ)
ရောင်းရန်အတွက်ငှားရန်အတွက်ပာိုတယ်၊ မိုတယ် နှင့် ရေတိုငှားရန် လူကြီးမင်းအားတဲ့နေ့ နဲ့ အချိန်ကိုသာရွေးပါ (အခန်း/အိမ်အားဓတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်) မနက်ခင်း နေ့လည် ညနေပိုင်း
တိုက်ခန်းရောင်း / ငှားဖို့ အပ်ရင် ဘယ်လောက်ပေးဖို့ လိုပါသလဲ?
တိုက်ခန်းများ…ငွေအပြီးမချေခင်အထိ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး အခမဲ့ပါ…
တိုက်ပိုင်ရှင်ထံမှ ရောင်းရငွေ၏ 1.8% သာ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အိမ်ငှားအတွက် တစ်နှစ်ချုပ်ရင် (တစ်လစာသာ) ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်…
တိုက်ခန်းဝယ်သူ နှင့် တိုက်ခန်းငှားသူ တို့အတွက်ကတော့ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်…(YgnHome.com ကအိမ်တွေ အရောင်း‌ရော အငှားပါအထူးမြန်စေတဲ့ လှို့ဝှက်ချက်ပါ)
ကုန်ကျစရိတ် 1.5%သာ တစ်လ 5သာင်း ကျပ်
တိုက်ခန်းတွေ ရောင်းချင်နေတာ ကြာပြီ... အမြန်ရောင်းချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အခန်းပေး အခန်းယူစနစ်ဖြင့် ဆောက်လိုသောပိုင်ရှင်များအတွက်
အခန်းပေးအခန်းယူ ဆောက်လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ကျေးဇူးပြုပြီး ဆောက်လုပ်မည့်နေရာ ကိုဖြည့်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည့်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း အကြာင်းပြန်ပါ့မယ်….
ဆောက်လုပ်ချင်သော တိုက်အမျိုးအစားရွေးပါ Service Apartments Condominiums Commercial Buildings အကြံပေးပါ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဂရမ်ပိုင်မြေ အခြား
အခန်းပေး အခန်းယူဆောက်ရင် ဆောက်လုပ်တဲ့အခန်းပေါင်းရဲ့ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးရတာလဲ?
ဆောက်လုပ်ချင်တဲ့ နေရာနဲ့ ဆောက်လုပ်ချင်တဲ့ တိုက်အမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းကွဲပြားတာကြောင့် … စိတ်ဝင်စားကြောင်းပို့ပြီးတာနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး…လိုအပ်တာများ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါ့မယ်…
အခန်းပေး အခန်းယူ ဆောက်လုပ်ချင်သူတွေနဲ့အတူ ရှိတဲ့ငွေကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံချင်တယ်ဆိုရင်ရောရလား...
YgnHome က ရင်းနှီးမြှပ်နှံချင်သူများ နဲ့ အခန်းပေးအခန်းယူဆောက်လုပ်ချင်သူများကို အခမဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်… YgnHome က Design & Build ကိုတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးပါတယ်…ဖုန်း 01-667758 ကိုဆက်ပေးပါ…ဒါမှမဟုတ် လူကြီးမင်းအားတဲ့အချိန်ကို အောက်တွင်ဖြည့်ပေးပါ..YgnHome မှဖုန်းပြန်ခေါ်ပါ့မယ်…ကျေးဇူးတင်လျက်…
မနက်ပိုင်း နေ့လည်ပိုင်း ညနေပိုင်း
အိမ်ပိုင်ရှင် ကန်ထရိုက်တာ ကုမ္ပဏီ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
YgnHome နှင့်လက်တွဲဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်… ကျေးဇူးပြုပြီး ဖုန်း 01-667758 ကိုဆက်ပေးပါ… ဒါမှမဟုတ် လူကြီးမင်းအားတဲ့အချိန်ကို ဖြည့်ပေးပါ…YgnHome မှဖုန်းပြန်ခေါ်ပါ့မယ်…
ကျွန်တော်က ဝယ်ရောင်းသမားဗျ...ပေါချောင်ကောင်းလေးဝယ်မယ် ပြီးရင်ပြန်ရောင်းမယ်...ဒါမျိုးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုရင်ရော?
YgnHome က ကြိုဆိုပါတယ်…
ပေါက်စျေးနဲ့ အမြန်ရောင်းချင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေအများကြီးထဲက လူကြီးမင်းအတွက်သင့်တော် အမျိုးအစားကို အခမဲ့အကြံပေးပြီး စိတ်ကြိုက်နှိုင်းယှဉ် ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့အတွက် ဖုန်း 01-667758 ကိုသာဆက်လိုက်ပါ…ဒါမှမဟုတ် အားတဲ့အချိန်ကို အောက်မှာဖြည့်ပေးပါ…YgnHome မှဖုန်းပြန်ခေါ်ပါ့မယ်…ကျေးဇူးတင်လျက်…